सरकारलाई मात चढ्यो, नेकपाले पद बाँड्नमै समय व्यतित गर्यो : जसरी पनि पास हुनेभो ‘एमसीसी’ नेकपाका नेताले खोले वास्तविकता (भिडियो) « Etajakhabar
सरकारलाई मात चढ्यो, नेकपाले पद बाँड्नमै समय व्यतित गर्यो : जसरी पनि पास हुनेभो ‘एमसीसी’ नेकपाका नेताले खोले वास्तविकता (भिडियो)
प्रकाशित मिति : ७ माघ २०७६, मंगलवार १७:४४
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले अग्नि सापकोटा आफ्नो जिल्लाको मान्छे भएकोले सभामुखको कार्यकाल सफल रहोस भन्ने शुभकामना दिएका छन् । उनले भने,‘उहाँ सभामुख भएकोमा म खुशी छु, उहाँ हाम्रै जिल्लाको नेता हो । उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु ।’
एमसिसीको बारेमा अहिले राष्ट्रिय रुपमै चर्चा तथा परिचर्चा भएको सुनाउँदै उनले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘कुनैपनि सहयोग, अनुदान लिँदा हामीले हाम्रो देशको हित र स्वार्थ हेर्नुपर्छ, अहिले चीनबाट सहयोग आएको छ । अमेरिकाले पनि एमसिसीमार्फत सहयोग गर्दैछ । हिन्तूस्तानले पनि सहयोग गर्दै आएको छ । तर, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र हित हेर्नुपर्छ ।’
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अहिले महत्वपूर्ण कुरा भनेको मुलुक कता जाँदैछ ? भन्ने नै रहेको सुनाए । उनले थपे,‘अहिलेको सरकारलाई जनताले अत्यन्तै ठूलो मौका दिएका थिए । जनताले यो सरकारलाई भारी बहुमत दिएका थिए । तर, यो दुई वर्ष सरकारले सुवर्ण मौकाको दुरुपयोग गरेको छ ।’ सरकारले यो दुई वर्षमा खास के काम गर्यो त? भनेर हेर्दा मुख्य काम गरेको भन्ने केही पनि नदेखिएको उनको आरोप छ । उनले भने,‘बरु, यो बीचमा भ्रष्टाचार बढेको छ । मलाई त कता कता यो सरकारलाई के भान छ भने हामीसँग बहुमत छ, हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मात चढेको छ ।’
नेकपाले अहिलेसम्मको समय पद बाँड्नमै व्यतित गरिरहेको उनको गम्भिर आरोप छ । उनले भने,‘मुलुकको विकासमा सरकारले ध्यान नै दिएन् । उसले मुलुकको हितमा काम गरेको देखिएन् ।’ उनले सरकार आफैंले यो बीचको अवधि कसरी खेर फालेको छ ? भन्ने कुरा उसले नै राम्रोसँग केलाएर हेर्न सुझाव दिए । उनले भने,‘सरकारले आफूले पाएको भारी बहुमतको सदुपयोग गरेको देखिएकै छैन् ।’
६ आश्विन २०७७, मंगलवार १४:१२